June 16, 2020 - PARIJATMEDIA
श्रीमान’ले म्यारिज एनिवर्सरी’मा बधाई नदिए पछि श्रीमती’ले गरिन् आत्मह’त्या
एजेन्सी : श्रीमानले विवाह उत्सकवको अवसरमा बधाई नदिए पछि एक जना महिलाले देहत्याग गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ । भारतको उत्तर(पूर्वी दिल्ली मानसरोवर पार्क इलाकामा भएको यो घटना भारतीय सञ्चार माध्यमले प्रसारण गरेका छन् । विवाह भएको दुई वर्षमै महिलाले यस्तो निर्णय गरेको बताइएको छ । तर महिलाका माइती पक्षले भने यो आ’रोप गलत भएको बताएका छन् । महिलाका घरतिरका परिवार सदस्यले श्रीमानले विवाह उत्सवमा वधाई नदिएको रिुसमा उनले यस्तो निर्णय गरेको बताएका छन् । तर माइती पक्षले उनको घाँुटी दुवाुएर ह त्या भएको आुरोप लगाएका छन् । महिलाले कुनै नोट लखेको पनि फेला परेको छैन । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । आकांक्षा नामकी ति महिला एक स्थानिय सरकारी विद्यालयको शिक्षक भएको बताइएको छ । उनको विवाह भएको दुई वर्ष मात्र भएको थियो । चलचित्र अभिनेत्रीले एजेन्सी– भारतमा प्रेमीले धोुका दिएको भन्दै एक च
भैरव’नाथ मन्दिर’को जयपत्र भाँचि’यो
भक्तपुर : भक्तपुर नगरपालिका ५ टौमढीस्थित भैरवनाथ मन्दिरको जयपत्र भाँचिएको छ । गएको बुधबार हावाहुरीसहित आएको वर्षाले उक्त जयपत्र भाँचिएको भैरव नाइके कृष्णभक्त (माइला) छुकांले जानकारी दिए । उनका अनुसार करिब साढे १९ मिटर लामो र करिब एक फिट चौडाइ भएको जयपत्र हावाहुरीसँगै आएको वर्षाको क्रममा भाँचिएको हो । महिलाले सिउँदोमा लगाउने शिरबन्दी जस्तै देवदेवीको मन्दिरमा राखिनेलाई जयपत्र भनिन्छ । यसलाई स्थानीय नेपालभाषामा भने ‘ताय्’ भनिन्छ । देवदेवीको प्रतीकको रुपमा रहेका कलश, चमर, चन्द्र, सूर्य, कमलको फूललगायत पत्रपत्र गाँसेर बनाइने भएकाले यसलाई जयपत्र भनिने बताइन्छ । भक्तपुर नगरपालिका एक वर्षअघि भैरवनाथ मन्दिरको जीर्णोद्धार गरेको थियो । उक्त जीर्णोद्धारपछि भक्तपुरका व्यवसायी कृष्णप्रसाद ताम्राकारले आफ्नो लगानीमा उक्त जयपत्र भैरवनाथ मन्दिरलाई चढाएको भैरव नाइके छुकां बताउँछन् । मन्दिरमा यसअघि प
यी हुन् भग’वान गणेश’का ११ स्वरु’प, कस्को पूजा’ गर्दा के फल मिल्छ
हिन्दू धर्म अनुसार मंगल'बार विशेष गरी गणेश भगवान'को पूजाआराधना गरिन्छ । सबै किसिमको दुःख निवारण'का लागि भगवान श्रीगणेश'को पूजा गरिन्छ । त्यसोत कुनै पनि शुभ कार्य गर्दा सबैभन्दा पहिलो गणेशको पूजा गर्ने गरिन्छ । मंगलाचरणको शुरुमै ॐ श्री गणेशाय नमः मन्त्रोच्चारण'बाट नै काम'को थालनी गरिएको हुन्छ । श्रीगणेशको नाम मात्र लिनाले पनि मानिसहरुको मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास गरिन्छ । ११ प्रकारका गणेश भगवानका स्वरुपमध्ये कुनै एकको विधिपूर्वक पूजा गर्नाले घरमा सुख, शान्ति र ऐश्वर्य प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास छ । सेतो गणेशः भगवान गणेशका विभिन्न स्वरुप मध्ये तपाईले सेतो गणेशको प्रतिमा देख्नुभएको होला । मठ मन्दिरमा समेत गणेश भगवानको सेतो प्रतिमा हुन्छन् । बजारमा पनि सेतो गणेशको मूर्ति किन्न पाइन्छ । यीनलाई ‘श्वेतार्क गणपति’ पनि भनिन्छ । ‘श्वेतार्क गणपति’को प्रतिमा घरमा स्थापित गर्नाले घरका
खुशीको खबर ! नेपालमा को’रोना सं’क्रमित धमाधम निको हुदै, पछिल्लो २४ घण्टामा ११७ जना अस्पतालबाट डिस्चार्ज भए !
काठमाडौं– नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा ११७ जना को’रोना सं’क्रमित निको भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । योसँगै नेपालमा को’रोना सं’क्रमण भएर निको हुनेको संख्या हालसम्म १ हजार १५८ पुगेको छ ।नेपालमा मंगलबार थप ३८० जनामा को’रोना भा’इरसको सं’क्रमण पुष्टि भएको छ । यो सँगै नेपालमा को’रोना सं’क्रमितको संख्या ६ हजार ५९१ पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नियमित लाइभ अपडेटमा नेपालमा हालसम्म ६ हजार ५९१ जनामा को’रोना भा’इरसको सं’क्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले अहिलेसम्म कोभिड-१९ पुष्टि भएका व्यक्तिको संख्या ६ हजार ५९१ पुगेको जानकारी दिएका हुन् । त्यसैगारी कपाल लामो बनाउन जसलाई पनि मन पर्छ । हरेक युवतीहरु कपाल लामो बनाउने सौन्दर्य प्रशाधनको खोजीमा भौतारिइरहेका हुन्छन् । तर, घरैमा सर्वसुलभ प्याज कपालको सुन्दरताका लागि उपयोगी हुन्छ भ
काठमाडौ । नेपालीले नगरेको सायदै कमै क्षेत्र र सफलता होला । अधिकांश विश्वको भूगोलमा छरिएर रहेका नेपालीको श्रीबृद्धी, उन्नती, प्रगती हेर्ने हो भने दुनियाँ अचम्बित हुँदै जिब्रो टोक्छ । नेपालका एक छोरा अन्दिप आचार्यले यस्तै सबै चकित हुने काम गरेका छन् । तपाईलाई लाग्थ्यो होला । संसारकै धनी व्यक्तिले मात्र सौखिन, अत्याधिक सुविधा सम्पन्न ठूलो सवारी चलाउँछ होला । तर नेपालकै छोरा अन्दिप संसारकै सर्बाधिक ठूलो बाइक चढ्ने ब्यक्तिमा पर्दछन् । अन्दिप आचार्य नेपाली नागरिक हुन् । तर उनी संसारकै सर्बाधिक ठूलो बाइक चढ्ने ब्यक्ति बनेका छन् । उनले हालै हार्ले डेभिडसनको भी ८ चोपर किनेका छन् । इंग्ल्यान्डको नटिंघममा बसोवास गर्ने अन्दिपले किनेको हार्लेको यस्तो बाइक इंग्ल्यान्डमै ६ वटा मात्र छन् । ती ६ मध्ये एक बाइक अन्दिप हुईकिन्छन् । उनी नटिंघममा गोर्खा किचेन नामक रेष्टुराँ सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
“सबैले चि,न्नुहोस् : यी हुन् क्वारेन्टिनमा महिलालाई सामूहिक बला,त्कार गर्ने अ,परा,धीहरू”
काठमाडौं । अहिलेको यस म,हामारीको समयमा पनि बला,त्कारजस्तो जघ,न्य अ,पराध गर्ने तीन जनालाई सात दिन थु,नामा राखिने भएको छ । कैलालीको क्वा,रेन्टिनमा ३१ वर्षीय महिलालाई बला,त्कार गरेको अभियोगमा प,क्राउ परेका तीन जनालाई ७ दिन हिरासतमा राख्न अदा,लतले अनुमति दिएको हो । जिल्ला अदालत, कैलालीले करणी सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धानका लागि ७ दिनको म्याद दिएको प्रह,रीले जानकारी दिएको छ । यो बीचमा यस घट,नालाई लिएर विरोधमा सोमबार पनि कैलालीको लम्की बजारमा प्र,दर्शन गरिएको छ । आइतबार लम्कीचुहा नगरपालिका–१ को कार्यालयसमेत तो,डफोड गरेका स्थानीय प्रदर्शनकारी सोमबार भने दिनभर शान्तिपूर्ण रूपमा वि,रोधमा उत्रिएका थिए । लम्कीचुहा–१ का वडाध्यक्ष जनक बमले घट,ना सामसुम पार्न खोजेको स्थानीयको आ,रोप लगाएका छन् । लम्की बजारको मुख्य चोकमा यातायात आवागमन ठप्प पारेका प्रदर्शनकारीले ‘घटना ढाकछोप गर्नेलाई कार,बाही गर, क्
काठमाडौंमा महिलाहरूको ग्याङ प’क्राउ
काठमाडौं। प्रहरीले काठमाडौंमा महिलासहित नौ जनालाई तास खेल्दै गरेको अवस्थामा प’क्राउ गरेको छ । काठमाडौंको रविभवनस्थित श्याम श्रेष्ठको घरमा तास खेलिरहेका ९ जनालाई नगद १ लाख रुपियाँ र ३ बुक ताससहित शनिबार दिउँसो प्रहरीले प’क्राउ गरेको जनाएको छ। विशेष सूचनाको आधारमा महानगरीय प्रहरी वृत्त कालिमाटीबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई प’क्राउ गरेको जनाइएको छ । प’क्राउ पर्नेहरूमा सोही ठाउँ बस्ने काभ्रे रोशी गाउँपालिका ५ घर भएकी ४५ वर्षीया कान्छी लामा, धनुषा जनकपुर घर भएकी ३४ वर्षीया अनिता कुशवाहा, काठमाडौंको लैनचौर घर भएकी ३७ वर्षीया शर्मिला मसाल श्रेष्ठ रहेकी छिन्। धादिङ थाक्रे गाउँपालिका ७ घर भई काठमाडौंको १४ कुलेश्वर बस्ने ३४ वर्षीय राजु भुजेल, धादिङ थाक्रे गाउँपालिका ५ घर भई काठमाडौंको कालीमाटी बस्ने ४२ वर्षीय आस्मान लामा, गोरखाको गोरखा नगरपालिका १३ घर भई हाल काठमाडौंको बानेश्वर बस्ने ४४ वर्षीय
उदिपको पूर्वप्रेमिका सिपोरा भन्छिन् – ‘शक्तिशाली देशमा असुरक्षित महसुश गर्दैछु’
नायिका आँचल शर्मा र डाक्टर उदिप श्रेष्ठको विवाह भएपछि एक युवतीको गसिपले नेपालको फिल्मी बजार धेरै तातियो । त्यो नाम हो सिपोरा गुरुङ्ग । उदिप श्रेष्ठले आफ्ना पूर्व प्रेमिकाका बारेमा केही कुरा बोलिसकेका छन् । उनको पहिलो प्रेमिका भने फिलिपिनी हुन् । दोस्रो प्रेमिका भने नेपाल कै हुन् । ति नेपाली प्रेमिका अरु कोहि नभएर नेपाल कै चर्चित भलिवल खेलाडी तथा नायिका सिपोरा गुरुङ्ग हुन् । उदिप श्रेष्ठले सार्बजनिक रुपमै नाम नलिएपनि सिपोरा गुरुङ्गले भने यस अघि नै नेसनल टेलिभिजनमा यो कुरा सार्बजनिक गरेकी थिइन । उनले आफ्नो प्रेमी उदिप श्रेष्ठ मात्र भनेका छैनन् पहिलो र अन्तिम प्रेमी पनि उनि नै हुन् भनेकी छन । नायिका तथा भलिबल खेलाडी सिपोरा गुरुङ अमेरिकामा छिन् । तर, उनी विश्वकै शक्तिशाली देशमा रहेर पनि असुरक्षित महशुश गरिरहेको बताउँछिन् । सामाजिक संजालमा स्टाटस कोर्दै उनले लेखेकी छिन्– ‘कोरोनाले नदुख
विवाह गर्न गएका बेहुलालाई मण्डपवाटै प्रहरीले समाते पछि। … कारण थाहा पाउदा सबै चकित
ओखलढुंगा, २ असार । विवाह गर्न जन्ती लिएर गएका बेहुलालाई मण्डपवाटै प्रहरीले नियन्त्रण’मा लिएको छ । प्रहरीले बालविवाह गरेको आरोपमा बेहुलासहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । केटाको उमेर २१ वर्ष र केटीको उमेर १८ वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने कानुनी माध्यता छ । उमेर नपुगी विवाह गर्न जन्ती लिएर गएका बेहुला लगायत ३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । ओखलढुङ्गा जिल्लाको मोलुङ गाउँपालिकामा गत जेठ २५ गते परिवारको सहमतिमा उमेर नपुगेका किशोर किशोरीको विवाह गराउन लागेको भन्दै उजुरी परेको हो । २२ वर्षीय युवक र १८ वर्षीया युवती भनिएको भएपनि प्रहरीले उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । स्थानियको उजुरी परेपछि प्रहरीले बेहुलासहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको हो । उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने दुहाला–दुलही दुवै मोलुङ गाउँपालिकाका स्थानीयवासी हुन् । पक्राउ पर्नेमा बेहुला, बेहुलाका बुवा र बेहुली पक्षबाट बालिकाका बुवा रहेको
स‌ंविधा’न संशोधन’मा अनुपस्थि’त हुने कस-कसलाई नेकपाले सोध्यो स्पष्टिकर’ण (पत्रसहित)
काठमाडौं– संविधान संशोधनमा अनुपस्थित हुने सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का ४ सांसदलाई नेकपाले कारवाही प्रक्रिया सुरु गरेको छ । संसदीय दलले चार सांसदहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । संविधान संशोधनमा अनुपस्थित हुनेमा हरिबोल गजुरेल, धनबहादुर बुढा, गोपालबहादुर बम र शिवकुमार मण्डललाई स्पष्टिकरण सोधिएको हो । नेपाल सरकारले ७ जेठमा भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको भूभाग समेटेर राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेको थियो । उक्त नक्सालाई निशान अध्यावधिक गर्नका लागि संविधान संशोधन गरेको छ । उक्त संविधान संशोधनमा सबै दलले एकमत भएर पक्षमा भोट हालेका थिए । समाजवादी पार्टीकी सरिता गिरीले भने विपक्षमा संशोधन दर्ता गराएकी थिइन् । अन्तिम समयमा आएर उनको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो । तर, सत्तारुढ दलकै चार जना सांसद संविधान संशोधनमा अनुपस्थित थिए । अनुपस्थित